Ụbọchị My Pet » Nzuzo nke a Great Kiss
emelitere ikpeazụ: Nov. 20 2020 | 2 min agụ
Isusu ọnụ bụ ihe ntụrụndụ na mgbe e mere ya nri, sparks ga ofufe na ị ga-ahapụ onye gị ogbi. Ma olee otú i kissing na-esonụ larịị? N'okpuru ebe, anyị kpughere ihe nzuzo nke a oké nsusu.
Nzuzo #1: Tiis
Iwepụta oge tiis tupu kpochidoro egbugbere ọnụ na-enyere aka wulite atụmanya. Ma ọ bụ na-ejide aka, caressing, ma ọ bụ rubbing Akwadoo, anụ ahụ a na kọntaktị tupu n'ezie nsusu ọnụ bụ ihe nzuzo ga-enyere ike na-akọrọ ahuhu tinyere anyịnwa ịhụkwu njikọ gị.
Nzuzo #2: Zuo Ike
Isusu ọnụ, ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-susuru a narị ugboro, pụrụ ịbụ nnọọ akwara egwu. Ihe bụ isi bụ iji zuru ike. Cheta na-eku ume miri, obi ruo gị ala, ma kwere na gị.
Nzuzo #3: Egbugbere Ọnụ
Na-eme ihe na egbugbere ọnụ gị ọzọ karịa isusu ọnụ. Aṅụ ma ọ bụ jiri nwayọọ nibbling ibe gị egbugbere ọnụ ga-ụgbọala ha crazy mmekọahụ erughị ala. Ọzọ egbugbere ọnụ-okowụk Usoro bụ na-agba ọsọ n'ọnụ nke ire gị ejighị ya kpọrọ ihe egbugbere ọnụ ha. Mgbe gị na kissing otú bulie, mgbanwe nrụgide na-agba nke na-enyere nsutu ike mkpali dị ka onye gị na ga na-amaghị ihe na-abịa ọzọ.
Nzuzo #4: Ntị, Imi, Anya, na olu
Ezie na isusu ọnụ na-Elezie lekwasịrị anya gburugburu egbugbere ọnụ nke na-adịghị nanị ebe ị kwesịrị ị na-elekwasị anya na. Isusu ọnụ ibe gị ntị, elele, imi, na eyelids niile aka na-atụgharị ihe ndị nkịtị nsusu ọnụ n'ime ihunanya bliss. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbanye ya a notch, agbalị playfully atarịta ibe ha arụ ha nti na olu. Njakịrị ndị a akpan akpan tụrụ ike ọhụrụ sensations na mmetụta ndị na ga gbakwunye ahuhu na ike nke gị na-aga ịdakwasị nsusu.
Nzuzo #5: MMETỤTA uche
Ezie na n'elu nzuzo nwere ike inyere onye ọ bụla n'ime atụgharị a oké kisser, nnukwu nzuzo nile idu ke gị obi ala na njikọ onye gị na. Iji hụ ezimezi oku mgbe isusu ọnụ, mkpụrụ obi unu ga-ekwu okwu ọ bụla ọzọ. Site n'ikere òkè anya akụkọ na-echeta, na-atụ egwu na oké ọchịchọ, na ikwe ka gị ezi uche na-egosi na ụzọ niile na-mmekọrịta gị na-a miri larịị. Ka a na-ọhụrụ, mmetụta uche ala ga-eme ka ị na-adịghị ike, nke a bụ otu n'ihe ize ndụ nke ga-kwesịrị ya.
Isusu ọnụ bụ ihe magburu onwe ụzọ na-egosi gị pụrụ iche na mmadụ dị nnọọ otú ihe ha pụtara nye gị. Na ihe nzuzo ndị a, a na-akpachi anya omume nwere ike ịgbanwe mmekọrịta gị n'ime na miri njikọ ị chọrọ.
Olee otú Iji Mkpapụ A Girl na-egosi Little Mmetụta
Ileta Key West, Florida na gị Pita